Ambohipo: vehivavy nosolaina, tratra nangalatra finday | NewsMada
Ambohipo: vehivavy nosolaina, tratra nangalatra finday
Tratran’ny olona nangalatra finday ny vehivavy iray teny Ambohipo, omaly. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka izy io, saingy hafa kely no nanaovan’ny olona azy. Nofatorana ary nosolain’ny olona teo amin’ny arabe ny lohan’izy io. Sady nihorakorahan’ny olona no nalaina sary nosolaina ilay vehivavy izay vao natolotra ny polisy.
Endrika iray isehoan’ny fitsaram-bahoaka ity teny Ambohipo ity. Mba tsy namono aza ny olona, na efa saika niafara tamin’izany aza. Voararan’ny lalàna rahateo ny famonoana olona na olon-dratsy aza izy. Mbola sarotra anefa ny handresy lahatra ny olona rehefa sendra ireo jiolahy tokoa, indrindra fa any amin’ny faritra any. Na malaza mafampana ra aza ny olona eny Ambohipo, tsy niroso tamin’izany.
Vokatry ny tsy fahatokisan’ny olona ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ihany koa ny fitsaram-bahoaka, ka anisan’ny maha sarotra ny fifehezana azy. Raha mahita fomba hafa tahaka ity teny Ambohipo ity hatrany anefa ny olona, mba mety hihena ny famonoan’olona fahatany. Na izany aza, anjaran’ny manampahefana ihany koa ny mandresy lahatra ny vahoaka tsy hirona loatra ho amin’izay fitsaram-bahoaka izay.